UYIFUMANA NJANI IGOOGLE YOKUKHANGELA IBAR KWISCREEN SEKHAYA SE-ANDROID - ITHAMBILE
Ukusuka kwimbonakalo yesikrini sasekhaya (xa sisandula ukufakwa ebhokisini) ukuya kumava omsebenzisi xa zizonke, kukho izinto ezimbalwa eziqinisekileyo ngezixhobo ze-Android. Isikrini sasekhaya esingagqibekanga siqulathe ii-icon zesicelo ezi-4 okanye ezi-5 eziyimfuneko kwidock, ii-icon ezimbalwa ezimfutshane okanye ifolda kaGoogle ngaphezulu kwazo, iwotshi / iwijethi yomhla, kunye newijethi yokukhangela kuGoogle. Iwijethi yokukhangela kuGoogle, edityaniswe neapp kaGoogle, ilula njengoko sixhomekeke kakhulu kwinjini yokukhangela kuzo zonke iintlobo zolwazi. Ukusuka kwi-ATM ekufuphi okanye kwindawo yokutyela ukufumana oko kuthethwa ligama, umntu oqhelekileyo wenza ukukhangela okungenani ama-4 ukuya kwama-5 yonke imihla. Ngenxa yokuba uninzi loluphando lwenziwa ukufumana ukujonga ngokukhawuleza, iwijethi yokukhangela kuGoogle ihlala iyintandokazi yomsebenzisi kwaye yenziwe yafumaneka kwizixhobo zeApple ukuqala nge-iOS 14.
I-Android OS ivumela abasebenzisi ukuba benze ngokwezifiso izikrini zabo zasekhaya ukuthanda kwabo kwaye basuse okanye bongeze iiwijethi ezahlukeneyo, phakathi kwezinye izinto. Abasebenzisi abambalwa bahlala besusa ibha yokukhangela kuGoogle ukufezekisa ukucoceka / ukujonga okuncinci kunye nee icon zabo ezifanelekileyo zedock kunye newijethi yewotshi; abanye bayayisusa kuba abayisebenzisi rhoqo kwaye abaninzi bayicima ngengozi. Ngethamsanqa, ukubuyisa iwijethi yokukhangela kwiscreen sakho sasekhaya se-Android ngumsebenzi olula kwaye kuya kukuthatha ngaphantsi komzuzu. Landela nje imiyalelo kweli nqaku, kwaye uya kufunda ukuba ungayongeza njani ibha yokukhangela kuGoogle okanye nayiphi na iwijethi ebuyela kwiscreen sasekhaya se-Android.
Uyifumana phi iGoogle yokuKhangela iBar kwi-Android Home Screen?
Sele kukhankanyiwe, iGoogle yokukhangela ngokukhawuleza iwijethi idityaniswe nenkqubo yokukhangela kuGoogle, ke qiniseka ukuba uyifakile kwisixhobo sakho. Uhlelo lokusebenza lweGoogle lufakwe ngokuzenzekelayo kuzo zonke izixhobo ze-Android, kwaye ngaphandle kokuba uyikhuphe ngesandla, ifowuni yakho iya kuba ne-app. Ngelixa ukuyo, hlaziya usetyenziso kuhlobo lwayo lwamva nje ( Google-Iiapps kuGoogle Play ).
1. Buyela umva kwisikrini sasekhaya se-Android kwaye cofa ixesha elide (cofa ubambe) kwindawo engenanto . Kwezinye izixhobo, unokucofa ngaphakathi macala ukuvula imenyu yokuhlela kwesikrini sasekhaya.
2. Intshukumo iya kwenza ukuba ukhetho lwasekhaya lweScreen luvele ezantsi kwesikrini. Kuxhomekeka kunxibelelwano lomsebenzisi, abasebenzisi bavunyelwe ukwenza ii-screen ezahlukeneyo zasekhaya.
Phawula: Ezi ndlela zimbini zisisiseko zokwenza ngokwezifiso ziyafumaneka kuzo zonke i-UI zinakho tshintsha iphepha lodonga kwaye ungeze iiwijethi kwiscreen sasekhaya . Ulwenziwo oluphambili njengotshintsho lobungakanani begridi yedesktop, tshintshela kwipakethe ye-icon yomntu wesithathu, uyilo lwesindululi, njl.njl.
3. Cofa apha Widgets ukuvula imenyu yokukhetha iwijethi.
4. Skrolela ezantsi kuluhlu lwewijethi ezikhoyo kwi Icandelo leGoogle . Insiza kaGoogle ineewijethi zescreen sasekhaya ezinxulumene nayo.
google chrome iyekile ukusebenza windows 10
5. Ukuya yongeza ibar yokukhangela kuGoogle kwiscreen sasekhaya , nje cofa ixesha elide kwiwijethi yokukhangela, kwaye uyibeke kwindawo oyifunayo.
6. Ubungakanani obungagqibekanga bewijethi yokukhangela ngu 4 × 1 Kodwa ungabutshintsha ububanzi bayo kukhetho lwakho ngokucinezela ixesha elide kwiwijethi kwaye urhuqa imida yewijethi ngaphakathi nangaphandle. Ngokucacileyo, ukutsala imida ngaphakathi kuya kunciphisa ubungakanani bewijethi kwaye ukubarhuqela ngaphandle kuyonyusa ubungakanani bayo. Ukuyihambisa kwenye indawo kwiscreen sasekhaya, cofa ixesha elide kwiwijethi kwaye nje ukuba imida ivele, yitsale naphi na apho ufuna khona.
Ukuyihambisa kwenye indawo yolawulo, Tsala iwijethi emaphethelweni esikrini sakho kwaye uyibambe apho de ipaneli phantsi kokutshintsha ngokuzenzekelayo.
Ngaphandle kwewijethi yokukhangela kuGoogle, unokujonga kwakhona ukongeza iwijethi yokukhangela ye-Chrome evula ngokuzenzekelayo iziphumo zokukhangela kwithebhu entsha ye-Chrome.
Susa ibar yokukhangela kuGoogle kwisikrini sasekhaya se-Android
Uyibulala njani iapps eApple ebalekayo ngasemva
Ungabakhupha njani abafowunelwa kwiqela le-WhatsApp
Yiyo leyo; ukwazile ukongeza ibha yokukhangela kuGoogle kwakhona kwiscreen sasekhaya se-Android. Landela inkqubo efanayo ukongeza kwaye wenze ngokwezifiso nayiphi na enye iwijethi kwiscreen sasekhaya.
Ukubuyiselwa kwenkqubo akuzange kugqibe ngempumelelo
usetyenziso lwenetflix aluyi kuvula windows 10
windows 10 ipv6 akukho nethiwekhi
windows ayinakuqhagamshela kumshicileli 0x00000bcb
Phumelela uhlaziyo olu-10 olunamathele kuma-99
Isikhombisi sigcina ukujikeleza iiwindows 10